प्रोफेसर लामामाथि यौन उत्पीड़नको आरोप - खबरम्यागजिन
Homeखबरदेशप्रोफेसर लामामाथि यौन उत्पीड़नको आरोप
March 23, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि देश, मुख्य समाचार 0
नयाँ दिल्ली, 23 मार्च।
सिक्किम विश्वविद्यालयका पूर्व संस्थापक उपकुलपति एवं वर्तमानमा सेण्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका प्रोफेसर महेन्द्र पी. लामामाथि यौन उत्पीड़नको गम्भीर आरोप लागेको छ। एक शोधार्थी छात्राले लामामाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएकी हुन्। पीड़िताले लामासँगै अर्का प्राध्यापक राजेश खरतमाथि पनि आरोप लगाएकी छन्। ती छात्राअनुसार प्राध्यापक खरतले लामालाई सहयोग गरेका थिए। केही दिनदेखि जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटी (जेएनयू)-मा यौन उत्पीड़नको मामिला चुलिएको छ। यो मामिलालाई लिएर युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसभन्दा अघि यसै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अतुल जौहरीमाथि पनि यौन उत्पीड़नको आरोप लागेको छ।
पीड़िताले आरोप लगाएअनुसार जेएनयूका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले उनलाई चीन लिएर गएका थिए। त्यहाँ उनीसँग दुर्व्यवहार र यौन उत्पीड़न गरे। यसमा अर्का प्राध्यापक राजेश खरतले प्रोफेसर लामालाई सहयोग गरेको पीड़िताको आरोप छ। यसपछि 8 जनवरीमा इण्टर्नल कम्प्लेण्ट कमिटीसमक्ष उनले उजुरी गरिन्।
पीड़िता छात्रा जेएनयूको सेण्टर फर साउथ एशियन स्टडिजकी शोधार्थी हुन्। उनले 8 जनवरीमा जेएनयूका उपकुलपति प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार र विश्वविद्यालयको आन्तरिक उजुरी समितिकी अध्यक्ष विभा टण्डनलाई मेल गरी दुवै प्राध्यापकविरुद्ध यौन उत्पीड़नको उजुरी दर्ता गरेकी छन्। शोधार्धी छात्राले सेण्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका दुवै प्राध्यापकविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेकी छन्। उनले दुवै प्राध्यापकलाई निलम्बित गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। यद्यपि दुवैविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै कार्वाही भएको छैन।
पीड़िताले विश्वविद्यालयका भीसी र आन्तरिक उजुरी समितिकी अध्यक्षलाई पठाएको चिट्ठीमा लेखेकी छन्, “आदरणीय महाशय/ महाशया, मैले यो पत्र तपाईंलाई 8 जनवरी 2018 -मा गरिएको उजुरीको सन्दर्भमा लेखिरहेकी छु। मैले प्रोफेसर एमपी लामा र प्रोफेसर राजेश खरतविरुद्ध यौन उत्पीड़नको उजुरी दर्ता गरेको थिएँ। दुवै प्रोफेसरलाई अहिले पनि एसआईएस बिल्डिङ र सेण्टर फर साउथ एशियन स्टडिजमा जानमा रोक लगाइएको छैन। यसबाहेक विश्वविद्यालयको भर्ती प्रक्रियाका अन्तर्वार्ता प्यानलमा पनि दुवै प्रोफेसरलाई स्थान दिइएको छ। यस्ता मानिस, जसमाथि धेरै जाँच चलिरहेका छन्, उनीहरूलाई यस्तो जिम्मेवारी किन दिइयो?”
पीड़िताले यो चिट्ठीमा प्रोफेसरद्वय महेन्द्र पी. लामा र प्रोफेसर राजेश खरतलाई सीएसएएसको अन्तर्वार्ता प्यानलबाट तत्कालै प्रभावी रूपमा हटाउने तथा जाँचको रिपोर्ट नआएसम्म उनीहरूलाई निलम्बित गर्ने माग गरेकी छन्। यदि उनीहरूलाई प्यानलबाट नहटाए तथा निलम्बित नगरिए आरोपी प्रोफेसरद्वयले जाँचलाई प्रभावित गर्नसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेकी छन्।
स्मरणरहोस्, यौन उत्पीड़नका आरोप लागेका लामा सिक्किम विश्वविद्यालयका पूर्व संस्थापक उपकुलपति हुन्। उनी यो पदमा रहँदा आर्थिक अनियमितताको मामिलामा फँसेका थिए।
सिमाना रोड सुकेपोखरीमा आँखा जाँच शिविर